Gaaraan buuxda gacanta la this software maamulka makhaayad jiilka xiga.
Download maxkamad version 30-maalin buuxda-ciyaaray ( 7,24 MB)
Baro ARPOS by arkaysid 5-daqiiqo movie interactive karbuuno
Top 10 sababo in la iibsado Abacre Restaurant Point of Sale
Abaal mariyey rating ugu sareeya:
Abacre Point Restaurant ee Sale waa jiil cusub oo software maamulka makhaayad ee Windows. Waxaa xal buuxda, laga bilaabo amar qaadanaya ka isxigaan, iyo soo afjaridda iyadoo wararka biilasha iyo canshuurta. Interface user ayaa waxaa si taxadar leh filaayo in aqbasho xawaaraha sare ee si wali ah iyo ka hortagga qaladaad caadi ah. Waxaa loogu talagalay isticmaalaya on kombiyuutarada badan, oo ka kooban heer lagu kalsoonaan karo oo ammaan oggolaansho.
The Layouts biilka martida ah laga beddeli karaa, iyo barnaamijka la samaysan karta wixii lacagaha, canshuuraha, iyo gratuities. Lacagta ay aqbali karto lacag caddaan ah, kaararka amaahda, ama jeeg.
Wixii maamulayaasha, waxaa jira set qani ku ah warar sheegaya in ay muujinaysaa sawir buuxa ka ah hawlaha maqaayadaha iyo wareegyada nolosha: isticmaalka menu, soo noqnoqoshada Boos, saacadood ee Xamuulka sare makhaayad, miisaska mashquulka badan, shaqaalaha ugu firfircoon, hababka lacag bixinta, iyo xisaabinta canshuurta automatic.
By standardizing habka maareynta restaurant oo dhan, software ka xagjirnimo ah hagaajinaysaa u adeegaya xawaaraha.
Way fududahay in la rakibo iyo fududahay in la isticmaalo. Aad liisan la awoodi u ogolaataa software taasi oo lagu isticmaalo deegaanka wax ka makhaayadaha qoyska leedahay yar in silsilado waaweyn.
Fiiro Gaar ah: daabacado Serial iyo shaxda jikada, ulo (line iyo qaab graphic) iyo gura kaashka ah waxa si buuxda u taageeray!